Xildhibaan Fiqi: NISA waxa ay qaadatay kaalintii afhayeenka Al-Shabaab – Hornafrik Media Network
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka falceliyey warbixin ay dhowaan shaacisay hay’adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo baahisay inuu Amiirka Al-Shabaab xilalkii ka qaaday, Mahad Karataay iyo Bashiir Qoor-Gaab oo ka mid ah hoggaanka Al-Shabaab.
Fiqi ayaa tilmaamay in mas’uuliyadda NISA aysan aheyn inay qabato shaqadii wasaaradda warfaafinta, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale wuxuu sheegay inay haatan hay’adda nabad sugida iyo sirdoonkaa qaranka u muuqato mid qaadatay kaalintii afhayeenka Al-Shabaab, islamarkaana ay soo warisay sheeko arrimo maamul iyo xil ka qaadis la xiriira oo kooxdaas dhexdeeda ka dhacay.
Xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa su’aal galiyey u jeedada laga lahaa warbixintaasi oo lagu daabacay bogga NISA, isaga oo xusay in qorshaha laga lahaa uu yahay sidii labadaas dambiile loogu soo dhoweyn lahaa gudaha magaalada Muqdisho.
Ma daaf baa mise waa indho la’aan waxa NISA haleelay! Maxaa xafiiska laga hogaamiyo NISA ka qaldan maalmahan!
Marka koowaad waxey qaateen kaalintii afhayeenka Alshabaab ayagoo noo soo wariyey sheeko arrimo maamul iyo xil ka qaadis la xiriira oo kooxdaas dhexdeeda ka dhacay.
Marka xigta labo Argagixiye oo 12-kii sano ee la soo dhaafay madaxda amniyaadka ee dilalka qorshaysan iyo qarxiyada qaabilsan ka mid ahaa ayey NISA umadda u tusinaysaa kuwo naxariis badan oo u damqanaya shacabka Soomaaliyeed!
Warkaan Hey’adda NISA ay isla xiijinayso ma jiro wax macno ah oo uu leeyahay mar haddii ay qaraxyadii sidii u sii soconayaan, ayadoo weliba labadaas Argagixiye ee ay buunbuuniyeenna xilalkii ay danbiyada ku geysan jireen laga xayuubiyey.
Mise waxaa lagaa yaabaa inuu jiro qorshe dahsoon oo labadaas dambiile wadada loogu sii xaarayo oo la rabo in lagu soo dhoweeyo Muqdisho ayadoo laga dhigayo In damiirkooda iyo diintoodu ay u diideen In ay Alshabaab ka sii mid ahaadaan, mararka qaarna ay dhici karto In xilal waaweyn looga magacaabo NISA oo ay kaalmeeyaan taliye Fahad.
Mas’uuliyadda NISA ma ahan in warkii wasaaradda warfaafinta ay sheegi jirtey ee xil ka qaadisyada ahaa mid la mid ah ay noo soo wariso, waajib wuxuu ka saaran yahey helista xogta cadowga, ku howlgalkeeda iyo ka hortagga weerarada argagixisada ee lidka ku ah ammaanka dalka iyo dadka.
Marka adigoo daaf qaba aad seexato waxaad soo toosaysaa ayadoo indhuhu isku kaa dhegeen!!